भिजाएको काँचो चना नियमित खानुका यति धेरै अचम्मको फाइदाहरु, छक्क पर्नुहुनेछ ! – List Khabar
Home / जीवनशैली / भिजाएको काँचो चना नियमित खानुका यति धेरै अचम्मको फाइदाहरु, छक्क पर्नुहुनेछ !
admin November 27, 2021 जीवनशैली Leaveacomment 119 Views
भिजाएको काँचो चना नियमित खानुका यति धेरै अचम्मको फाइदाहरु, छक्क पर्नुहुनेछ ! जनिराखौँ । चनामा प्रशस्त मात्रामा फाइबर पाइन्छ, जुन पाचन प्रक्रियालाई बलियो बनाउन असाध्यै महत्वपूर्ण हुन्छ । यस्ता छन् काँचो चना खानुका फाइदाहरु:-
१) रातभर भिजाएको चनामा अदुवा, नुन र जिरा मिलाई बिहान खाने गर्नाले कब्जियतको स’मस्या क्रमशः कम हुँदै जान्छ । चना भिजाएको पानी खानु अझ लाभदायक हुन्छ । २) चनामा ग्लुकोजको मात्रा कम हुन्छ । यो डायबेटिज भएका मानिसका लागि उत्तम भोजन हो ।
३) चनामा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, क्याल्सियम, म्याग्नेसियमलगायत तत्व प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । यी तत्वले शरीरलाई ऊर्जा प्रदान गर्छन् । ४) एकदेखि दुई मुठी चना हरेक दिन खाने हो भने रगतमा चिनीको मात्रा नियन्त्रित अवस्थामा रहन्छ । डायबेटिज हुन पाउँदैन । भएको छ भने चनाले फाइदा पु-याउँछ ।
५) रक्तअल्पता भएको छ भने हरेक दिन महसँग चना खाने गर्नुपर्छ । चनामा आइरन र फोस्फोरस प्रशस्त मात्रामा हुन्छ । यसले रक्तअल्पता कम गर्नुको साथै रगतमा हेमोग्लोबिनको मात्रा बढाउँछ । ६) चनाको बेसनमा बेसार मिसाई अनुहारमा लगाउने गर्नाले अनुहार चम्किलो हुन्छ ।
७) रातभरि भिजाएको चनामा थोरै मह मिसाएर दिनहुँ खाने गर्नाले पत्थरीको स’मस्या देखापर्ने जोखिम कम हुन्छ । पत्थरीको स- मस्या देखापरिसकेको छ भने यसो गर्नाले स्टोन सजिलै निस्किने सम्भावना रहन्छ । चनाको पिठोको रोटी खानाले पेट सफा रहन्छ ।
८) चना भिजाएको पानीले अनुहार धुने गरेमा अनुहार चम्किलो हुन्छ । ९) नुहाउनुअघि चनाको बेसनमा दूध अथवा दही मिसाई पेस्ट बनाएर अनुहारमा लगाउने र १०–१५ मिनेटपछि चिसो पानीले प-खालेर नुहाउने गर्नाले अनुहारमा रहेका डन्डीफोरलगायत दाग, दाद आदि हराएर जान्छन् ।
११) पि- साब आइरहने समस्या छ भने भुटेको चना दिनहुँ खाने गर्नुपर्छ । सक्खरसँग चना खाने गर्नाले पिसाबमा इन्फेक्सन देखापर्ने जोखिम कम हुन्छ । ११) बाडुली लागेर हैरान भएको बेला चनाको सुकेको पातको धुवाँ लिनाले बाडुली रोकिन्छ ।
Previous जाडो महिनामा नगर्नुहोस् यस्ता गल्ती, स्वास्थ्यलाई भारी समस्या पर्ला पढ्नुहोस्
Next अब बदलिन्छ यी ५ राशिको भाग्य, १२ वर्षपछि कुम्भ राशिमा गुरु बृहस्पतिको आगमन